Mpanamboatra sy mpamatsy sivana sifotra excavator China MINYAN
Fihetseham-po tsara, lifte service lava, rafitra tsotra ary fikojakojana mety.
Fihetseham-po tsara, fiainana maharitra, firafitra tsotra ary fikojakojana mety. Ampiasaina betsaka amin'ny metallurgy, fitaovana fananganana, indostria simika, voamaina, fanafody, zezika simika ary indostria hafa fitiliana fitaovana.
Ny vokatra dia aondrana any Azia atsimo atsinanana, Azia atsimo, Moyen Orient, Azia Atsinanana, Amerika atsimo ary faritra hafa, ary tsara ny kalitaon'ny vokatra. Ny fahaiza-mamatsy orinasa dia azo ahitsy ara-potoana miaraka amin'ny fepetra takiana.Ny vokatray dia azo ampiarina amin'ny excavator rehetra, mandray ny mpanjifa ihany koa izahay azafady mba alefaso aminay ny sary na ny maodely excavator. Izahay dia orinasa manana traikefa nandritra ny taona maro tamin'ny fanodinana vokatra, ao anatin'izany ny siny excavator OEM dia misy.Warranty:1 taona ho an'ny fiantohana milina
Fahaizana manomeFahaizana manome:50 Piece / Pieces isam-bolana Sivana sivanaFonosana sy fandefasanaAntsipirian'ny fonosanaAntsipirian'ny fonosana Paleta na hazo mahazatra mahazatra. 1. 20GP iray dia mahazaka sombin-kazo 12-14 eo ho eo 1.0m3 na 1.2m3 ho an'ny excavator 20ton (Sakany latsaky ny 42 santimetatra)2. ny 40HC iray dia mahazaka sombin-kazo 26-28 eo ho eo 1.0m3 na 1.2m3 ho an'ny excavator 20ton;3. 20GP iray dia afaka mitondra siny 1.6m3 eo ho eo ho an'ny 30ton excavator; 4. ny 40HC iray dia afaka mamoaka siny 16.6m3 eo ho eo amin'ny excavator 30ton.
PortShanghai / Lianyungang / QingdaoFe-potoana :
Quantity (Pieces) 1 - 1 2 - 10 11 - 50 > 50
Est. Time (andro) 8 30 55 Hifampiraharahana
Q1. Inona ny vidinao tsara indrindra?A: Izahay mivantana dia hanolotra anao ny vidin'ny fifaninanana tsara indrindra.Q2. Ahoana no fomba hifandraisako aminao? Tokony hatoky anao ve aho?A: Azonao atao ny misafidy ny antoka ara-barotra ho toy ny fomba fandoavanao vola izay afaka miaro ny tombotsoanao, fivarotana kintana telo mpikambana ao amin'ny Alibaba izahay.Q3. Inona ny fe-potoana fandoavam-bola?A: Ny sendika tandrefana, T / T, azo antoka ny antoka ara-barotra.F4: Rahoviana no daty fanateranao?A: Matetika 25-30 andro aorian'ny nahazoanao ny fandoavanao vola, ary hiezaka mafy izahay mba hamenoana ny takiana aminao. Izahay dia mifantoka amin'ny finoana fitantanana ny "kalitao voalohany, Reputation important, Customer based".
Previous: siny vato excavator
Manaraka: excavator ripper
Kitapo fisavana vatobe Excavator
Kitapo fisavana Excavator
Siny kely sotro kely 70 sakany